ဆေးခြောက်ကျွန်း | Sentinel del Norte | ခရီးသွားသတင်း
Sentinel မြောက်ဘက်၊ လူသားစားကျွန်း
Mariela Carril | | အိႏၵိယ
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ကိုင်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အခါချိတ်ဆက်ထားသည့်အခါကမ္ဘာကြီးသည်ခေတ်မီ။ ခေတ်မီပြီးကျွန်ုပ်တို့ XXI ရာစုအတွင်းရှိနှင့်ပြီဟုထင်မြင်ကြသည်။ သို့သော်အမှန်တရားမှာကမ္ဘာကြီးသည်ကျယ်ပြန့်နေဆဲဖြစ်သည် လူတို့သည်လွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်များစွာကကဲ့သို့ပင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည့်ခေတ်မီမှုနှင့်ဝေးကွာသောနေရာများရှိသည်.
၌ဤထောင့်တစ်ခုမှာ အစ္စ Sentinel မြောက်မှကပ္ပလီကျွန်းစုပိုင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှိကျွန်းလေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုလူသားတိရစ္ဆာန်ရုံဟုလူသိများသော်လည်းကြာမြင့်စွာကတည်းက၎င်းကိုလူသိများခဲ့သည် လူသားစားကျွန်း...
1 မြောက် Sentinel ကျွန်း
3 အဆိုပါ Sentinelese, လူသားစား?
မြောက် Sentinel ကျွန်း
ငါပြောခဲ့သလိုပဲ ၎င်းသည်ကျွန်းစု၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည် ကပ္ပလီကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၌တည်၏ တည်နေရာလှည့် မြန်မာနှင့်အိန္ဒိယအကြား။ ဤကျွန်းအများစုသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းရှိကပ္ပလီနယ်မြေနှင့်နီကိုဘာကျွန်းများကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။
အဲဒီမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေတကယ်ကိုရှိခဲ့တယ် အခြားလူ ဦး ရေနှင့်အနည်းငယ်သာအဆက်အသွယ် သူတို့ရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးအဖြစ်လူသိများကြသည် Sentinelese. ၎င်းသည်အခြေခံအားဖြင့်မျိုးနွယ်စုတစ်ခုဖြစ်သည် မုဆိုးနှင့်စုဆောင်း ၎င်းသည်အမဲလိုက်ခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်ဒေသအလိုက်သစ်ပင်ပန်းမန်များဖြင့်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
လယ်သမားများမဟုတ်ဘဲအမဲလိုက်သူများ၊။ ၄ င်းတို့သည်မြေယာကိုမစိုက်ပျိုးသောကြောင့်မီးထွန်းရန်အတွက်နည်းလမ်းများတီထွင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ ဒါကြောင့်မနုropဗေဒပညာရှင်ကစဉ်းစားပါ သူတို့တစ်တွေစရိုက်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်ကြသည်.
လူ ၅၀ မှ ၅၀၀ ကြားကိန်းဂဏန်းအတိအကျကိုမပြောနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အုပ်စုကြီးတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ဆူနာမီကြောင့်သူတို့ဘယ်လိုထိခိုက်ခဲ့သလဲဆိုတာလည်းမသိရသေးပါဘူး။
Sentinelese မှဖြစ်ကြသည် မှောင်မိုက်အသားအရေတိုတိုနှင့်အာဖရိကဆံပင်။ သူတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်သာသိရသောအချက်မှာလွန်ခဲ့သောရာစုနှစ်အကုန်ပိုင်းမှအနည်းငယ်သာအဆက်အသွယ်များမှသင်ယူရရှိခဲ့သည့်အချက်များဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အတွင်းပိုင်းအခန်းကန့်များမရှိသည့်တဲများ၌နေထိုင်ကြပြီးကြမ်းပြင်သည်စွန်ပလွံသီးများနှင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်ကြီးမားသည်မဟုတ်ပါ။ မိသားစုများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအတူတူရှိပြီးဘာသာရေးစုရုံးမှုများနှင့်ထုံးတမ်းစဉ်လာများအတွက်တဲကြီးကြီးရှိသည်။
ဒီလူ သတ္တုလုပ်ငန်းကိုမသိပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်းပေါ်မှာသတ္တုလုံးဝမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာသတ္တုမှမရှိသလောက်ကသူတို့ကမ်းခြေမှာပေါ်နေတဲ့ပုံပဲ။ ၎င်းသည်အနီးအနားရှိသန္တာကျောက်တန်းပေါ်သို့ပြေး။ ကုန်ပစ္စည်းများသည်သူတို့ကိုသံအရာဝတ္ထုများဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသောကုန်တင်သမားနှစ် ဦး ၏အဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည်။
ကျွန်းတွင်ဂွသုံးကောင်ရှိသည် ဒါကြောင့် Sentinelese တွေဟာသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့သန္တာကျောက်တန်းတွေထက်ပင်လယ်ထဲမှာငါးဖမ်းတာတောင်မလုပ်သင့်ဘူး။ သူတို့၏ဖောင်များကိုအောက်ခြေထိထိသောသတ္တဝါများဖြင့်တွန်းချလိုက်သည်။
နိုင်ငံခြားသားများနှင့်အဆက်အသွယ်အနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည် ရလဒ်ကောင်းများ - အင်္ဂလိပ်တို့သည် XIX ရာစုအကုန်တွင်ရောက်ရှိလာပြီးအကျဉ်းသားများအားအရေးကြီးသောလက်ဆောင်များဖြင့်ပြန်ပို့မည်ဟုစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ သို့သော်စုံတွဲတစ်တွဲသေဆုံးသွားသောကြောင့်ကလေး ၂ ယောက်ပြန်လာပြီးလက်ဆောင်များရှိသည်။ ဗြိတိသျှတို့သည်ကျွန်းသို့ ပြန်၍ မလာကြသောကြောင့်ကျွန်းကိုသိပ်စိတ်မ ၀ င်စားပုံရသည်။
၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်များတွင်အိန္ဒိယလူမျိုးများပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့သည် Sentinelese သူတို့တောထဲမှာရောက်သွားတယ် သူတို့ကသူတို့နှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်လို့မရဘူး။ နောက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယရေတပ်သည်အနီးအနား၌ကျောက်ချရပ်နားပြီးကမ်းခြေ၌လက်ဆောင်အချို့ထားခဲ့သည်။ ရှိပြီးသား ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များတွင်မနုropဗေဒပညာရှင်များ၏လေ့လာရေးခရီးသည်ထပ်မံကြိုးစားခဲ့ပြန်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကံကြမ္မာရှိသော်လည်းသိသိသာသာဘာမျှမရရှိနိုင်ပါ။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအကြောင်းရယ်စရာအရာဖြစ်၏ 1974 ခုနှစ်တွင်သူတို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူပြန်လာ၏ အမျိုးသားရေး ပထဝီ နှင့် Sentinelese မြှားနှင့်အတူသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်လမ်းဆုံမှာထွက်လာ၏။ အမေရိကရှိစပိန်လူမျိုးများကသူတို့ကိုကစားစရာများ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ မြှားများသည်နောက်တစ်ခါပျံသန်း။ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတစ် ဦး ကိုဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်စေခဲ့သည်။
၎င်းသည် '' 90 '၌သာဖြစ်ခဲ့သည် Sentinelese သူတို့ကသင်္ဘောများပိုမိုနီးကပ်စွာလာခွင့်ပြုသည် ဒါပေမယ့်အတော်လေးဘယ်တော့မှမ။ နောက်ဆုံးတွင်အိန္ဒိယအစိုးရသည်အဆက်အသွယ်မရရှိရန်ရပ်တန့်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့် ၂၀၀၄ ခုနှစ်ဆူနာမီကြောင့်မည်သို့ထိခိုက်ခဲ့သည်ကိုလည်းမရှင်းလင်းနိုင်ပါ။
၂၁ ရာစုအတွင်းတွင်၎င်းကိုလူသိများသည် သူတို့အဲဒီမှာညတည်းခိုရတဲ့တံငါသည်နှစ်ယောက်ကိုသတ်ပစ်လိုက်တယ် ပြီးတော့သူတို့ကရဟတ်ယာဉ်တွေကိုကျောက်ခဲတွေနဲ့မြှားတွေနဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေခဲ့တယ်။ ကြားချင်သူ၊ ဒီလူတွေဟာငါတို့ယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ဘာမှမသိချင်ဘူးဆိုတာထင်ရှားတယ်။
အချို့အတွက်၎င်းသည်အခြားသူများအတွက်ဘဏ္treာတစ်ခုဖြစ်သည် လူ့တိရစ္ဆာန်ရုံ။ ဒါဟာမနုropဗေဒပညာရှင်ကယုံကြည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ အ Sentinelese သူတို့သည်ကျွန်းပေါ်တွင်နှစ်ပေါင်း ၆၅၀၀၀ ခန့်နေထိုင်ခဲ့သည်ဆိုလိုသည်မှာလွန်ခဲ့သောရေခဲခေတ်မတိုင်မီနှစ်ပေါင်း ၃၅၀၀၀ နှင့်မြောက်အမေရိက၏ကြီးမားကျယ်ပြန့်မှုမတိုင်မီနှစ်ပေါင်း ၅၅၀၀၀ နှင့်ပိရမစ်များမတည်ဆောက်မီ ၆၂၀၀၀ အထိဖြစ်သည်။
ထိုသို့ယုံကြည် ဒီလူတွေဟာအာဖရိကကနေပထမဆုံးထွက်လာတဲ့လူသားတွေဆီကဆင်းသက်လာတာပါ ဒါအံ့သြစရာပါပဲ မနုropဗေဒပညာရှင်များသည်၎င်းတို့၏ရန်လိုခြင်းနှင့်ပိတ်ထားသောအပြုအမူများနှင့် ပတ်သက်၍ သီအိုရီလည်းရှိသည် - ကျွန်းသည်ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်အာရှကြားရှိရှေးခေတ်လမ်းကြောင်းများ၊ ကျွန်လမ်းကြောင်းများဖြစ်သည်။ လူများဆင်းသက်နှင့်ဖမ်းယူရန်။
ထို့ကြောင့်သူ၏ရန်လိုမုန်းတီးမှုနှင့်ဤလောကမှထွက်ခွာလိုသောဆန္ဒ။ ဒါပေမယ့် လူသားစားမှလာအဖြစ်သူတို့၏ကျော်ကြားမှုဘယ်မှာရှိသနည်း?
အဆိုပါ Sentinelese, လူသားစား?
ဤကျော်ကြားမှုသည်သူတို့ကိုသိလိုသောနိုင်ငံခြားသားများသို့မဟုတ်ကျွန်ပိုင်ရှင်များထံမှအကာအကွယ်ပေးခဲ့သည်။ amanရိယာတဝိုက်တွင်ကပ္ပလီကျွန်းများရှိလူများသည်လူသားစားသူများဖြစ်သည်ဟူသောကောလာဟလများအမြဲတမ်းရှိခဲ့သည်။ သက်သေအထောက်အထားမရှိပါ အချို့သောလူမျိုးစုများသည်သူတို့၏ဘိုးဘေးတို့၏အရိုးများကိုလက်ဝတ်ရတနာအဖြစ်အသုံးပြုခြင်းဟူသောအချက်မှဖြစ်နိုင်သည်။ ဦး ခေါင်းခွံများပါဝင်သည်။
တော်လမီဂရိနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်သည်ဘီစီဒုတိယရာစုအစောပိုင်းကပြောခဲ့သည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၌လူသားစားကျွန်း ဒါကြောင့်လူသားစားတွေရဲ့ဒဏ္legာရီဟာသင်္ဘောသားတွေဆီကိုအမြဲပျံ့နှံ့သွားတယ်။ တောင်မှ မာကိုပိုလို ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်းစု၏ပြည်သူများကို '' ဖော်ပြခဲ့သည်Savage နှင့် of တစ်ပြိုင်ပွဲe သူတို့မြေပေါ်မှာသွားသောသူတိုင်းတိုင်းကိုသတ်စားသောသူသည် brute"။
ဒီမှာအနည်းငယ်ရှိတယ်၊ အဲဒီမှာအနည်းငယ်၊ လူတို့၏အရိုးများနှင့် voila များဖြင့်တန်ဆာဆင်ထားသောလူများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူသားစားများ၏ဒဏ္haveာရီရှိသည်။ ပြီးတော့အဲဒါမလုံလောက်သေးဘူးဆိုရင်ဒီလူတွေကိုဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၏ရေကိုမည်သည့်အခါမျှဖြတ်သန်း။ မရပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားအကြံပေးလိုသည်မှာသင့်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ပါ၊ ဂူဂဲလ်ကမ္ဘာသို့ သွား၍ ကမ္ဘာ၏ဤအပိုင်းကိုကြည့်ပါ။ သင်သည်ကျွန်း၏ဂြိုလ်တုဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနိုင်မည်။ ၎င်းတို့သည်တောအုပ်ထူထပ်သောကျွန်းတစ်ကျွန်းနှင့် '၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်သောင်တင်နေသည့်ကုန်တင်သင်္ဘော၏ပုံသဏ္muchာန်ကိုများစွာမပြသပါ။
Sentinelese များသည်ယနေ့လူတိုင်းကိုကြည့်ရှုနေသောကမ္ဘာ၏အကြည့်နှင့်ဝေးနေဆဲဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင် မှလွဲ၍
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အာရှခရီးသွားခြင်း » အိႏၵိယ » Sentinel မြောက်ဘက်၊ လူသားစားကျွန်း
နွေရာသီ 2016, အဘယ်အရာကိုဂျာမနီ၌ကြည့်ရှုရန်